Madaxwayne Ku-xigeenka Puntland Oo Sheegay Inayna Madaxwayne Denay Salaanta Iska Qaadin
Sunday May 24, 2020 - 08:33:41 in News by Hadhwanaag News
"Waxaan qoonsaday [magacaabista] taliyaha madaxtooyada."
Khilaafkooda ayaa salka ku haya kala lahaanshiyaha awoodaha maamul ee labada mas'uul.
Madaxweyne kuxigeenka oo waraysi gaar ah siiyay BBC laanta Af-Soomaaliga ayaa intaa ku daray in khilaafkooda uu gaaray heer aysan hadda saalanta iska qaadin labadan mas'uul oo ku wada shaqeeya dhismaha madaxtooyada Garowe.
"Waxaan qoonsaday [magacaabista] taliyaha madaxtooyada. Madaxtooyadu waa meel naga dhaxaysa oo aan u wada shaqo tagno, wada joogno, wada maamulno. Madaxweynuhu markuu wiilkiisa keensaday, wiilkii aan anigu keenayna uu meeshii ka eryay, marka dee meel la isku haleyn karaba ma ah," ayuu BBC-da u sheegay Axmed Karaash.
Balse waraysi uu maalin ka hor madaxweyne Deni siiyay telefishinka BBC Somali ayaa waxa uu ku sheegay in asagu uu leeyahay go'aanka magacaabista xilalka.
"Nidaamka dastuurka ah ayaa waxa uu na farayaa marka la magacaabayo golaha wasiirrada iyo waxyaabaha la midka ah in laga wadatashado oo aan talo weydiiyo, laakin go'aanka uu madaxweynuhu leeyahay," ayuu yiri Siciid Cabdullahi Deni.
Isfahan waaga labada mas'uul ayaa meel adag gaaray kadib markii 22-kii bishan uu madaxweyne Siciid Cabdullahi Deni magacaabay wasiirro iyo wasiirro kuxigeen, kuwaasoo uu sheegay inuu kala tashaday madaxweyne kuxigeenka.
"Ma dhicin [wadatashi], marxalad aan ka wada tashanno markaa ma jirin…..war dee annagaan salaanta iska qaadin, miyaan wada tashan karnaa," ayuu yiri Axmed Karaash.
Ma aha markii ugu horreysay ee labada mas'uul ee ugu sarreeya Puntland ay isku khilaafaan hannaanka awood wadaaga labadooda xafiis, iyadoo madaxweyne iyo kuxigeenkii hore ay isku khilaafeen arimo ku aaddan go'aannada masiiriga ah ee maamulkaasi.